Cufflinks & Tie inkantini Factory - China Cufflinks & Tie inkantini abakhiqizi nabaphakeli
Ukugqoka okuhehayo kufanele kuhambisane necufflink eyenziwe ngokwezifiso noma uthayi webha. Ziyizipho ezinhle ezinhle zosuku lobaba, ukuthweswa iziqu, usuku lokuzalwa, usuku lokuzalwa, umshado noma cishe noma yikuphi ukupha izipho nganoma yisiphi isikhathi sabesilisa. Umsebenzisi angafaka ama-cufflinks kumasudi, amahembe noma izingubo ezihlelekile zansuku zonke noma ukusetshenziswa kwanoma yisiphi isikhathi, kuyilapho ibha yethayi eyodwa kufanele ibe yiqoqo lawo wonke umuntu. Izipho Ezicwebezelayo zinokuhlangenwe nakho kweminyaka engama-36 ekukhiqizeni ama-cufflink amaningi kanye nemigoqo yokubopha, izitayela zingaba zakudala, imfashini, ukunethezeka, zilula ngendlela othanda ngayo. Inqubo yethu yokufaka kanye nokugcwaliswa kombala kuzokwenza ukugcina into 'ihlale isikhathi eside, ngaphezu kwalokho, amadizayini amasha avulekile athandwayo ongawakhetha. Imininingwane: ● Vula imiklamo yokukhethwa ● Ukuma, okokusebenza, osayizi, imibala eyenziwe ngokwezifiso ● Umbala: isisekelo ngesigaxa, indawo enombhalo, ukugcwaliswa kombala, ukuphrinta ● Ilogo: Stamping, Casting, Photo etched, Eqoshiwe, ephrintiwe, epoxy sticker. ● Iphakheji: 1pcs / poly bag, ukupakisha ibhokisi lesipho kuyatholakala noma ngokuya ngezidingo zamakhasimende
Bopha ibha / uthayi isiqeshana / bopha isilayidi
I-Cufflink kanokusho nenhle